Raharaha Mamy Ravatomanga : Efa eny amin’ ny Chaine pénale -
AccueilRaharaham-pirenenaRaharaha Mamy Ravatomanga : Efa eny amin’ ny Chaine pénale
25/01/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ankoatra ireo fanangonan-karena any ivelany sy ny raharaha izay efa nampalaza an’i Mamy Ravatomanga izay mpandraharaha kalaza nandritra ny fotoanan’ny Tetezamita, dia mbola misy ihany koa ny raharaha izay miandry azy eto Madagasikara , dia ny raharaha JIRAMA izany. Ny Birao miady amin’ ny kolikoly no fantatra fa anisan’ny nisahana ny raharaha mikasika ny fanodinkodinana fananam-bahoaka teny amin’ ny JIRAMA, ary raha ny fantatra dia vita tanteraka ny famotorana izay natao hoy ny tale jeneraly ny BIANCO Jean Louis Andriamifidy, ka efa eny amin’ ny Chaine pénale izao ny raharaha. Manoloana izany indrindra dia mbola eo ampiandrasana ny hipoiran’ ny antontan-taratasy avy amin’ ny tompon’andraikitra etsy 67 ha indray ny rehetra. Raha ny fantatra ihany koa mantsy dia toa efa tamin’ ny taona 2016 no fantatra fa efa nahavitan’ ny fanadihadiana ho an’ ny BIANCO, ka andrasana izay mety ho tohiny.
Nanamafy ny mpitandro ny filaminana : « Voarara ny famoriam-bahoaka rahampitso »